Umsebenzisi ukongeza imoto yakhe kwiKhayaKit kwaye ayilawule kude | Ndisuka mac
Umsebenzisi ukongeza imoto yakhe kwiKhayaKit kwaye ayilawule kude
Ngokuqinisekileyo uninzi lwethu xa sibukele uthotho «imoto emnandi»Sasicinga ukuba asinakuze siyibone. Ukutsiba ngaphezulu kwezinye iimoto, okanye ukumilisela imijukujelwa, ngokuqinisekileyo akunjalo. Kodwa namhlanje singakwazi ukuthetha nezinye iimoto, kwaye kungekudala bazakuqhuba bodwa.
Okwangoku, umsebenzisi okrelekrele ukwazile ukudibanisa iJaguar yakhe kwisicelo HomeKit Ukusuka kwiApple. Awunakuyixela ukuba iza kuvela kuwotshi okwangoku, njengakuthotho, kodwa ungavula iingcango, okanye ubeke imeko yomoya evela kwiApple Watch. Amaxesha ngamaxesha.
USiobhán Ellis, ungumsebenzisi okrelekrele okwazileyo ukudibanisa imoto yakhe yombane kwinkqubo kaKhaya yaseKhaya ka-Apple, ukongeza ii-icon kwisicelo sokuvula imoto, ukulawula ulawulo lwemozulu kunye nolunye ulawulo kwiJaguar yakhe.
Ukucwangciswa, okuchazwe ngokweenkcukacha kwibhlog IKhaya laseKhaya elisebenzayo, ivumela ukubeka iliso, ukulawula kunye nokuzenzekelayo izinto ezininzi zesithuthi sombane IJaguar I-Pace usebenzisa iApple "yasekhaya" usetyenziso.
Sebenzisa iplagi Isenzi sasekhaya Kwi-Jaguar InControl API ebizwa nge-homebridge-jlr-incontrol, u-Ellis ukwazile ukubopha idatha yezithuthi ezinje ngemeko yentlawulo, inqanaba lentlawulo, imozulu, njl., KwiKhayaKit, kunye nokuthumela imiyalelo esisiseko.
Iplagi ibonakala ifuna "isixa esifanelekileyo" soqwalaselo lwencwadana yemigaqo kwaye yazisa izilumkiso ekuqaleni, kodwa isebenza kakuhle njengezinye izisombululo ezisekwe kwiKhayaBridge kwiKhayaKit.
Ukudityaniswa neKhayaKit kuvula ithuba lokudala iindlela ezimfutshane, kunye nemisebenzi yokuzienzekelayo yasekhaya yesithuthi. Ngeenkonzo ezinje CarPlay ziyafumaneka kwizithuthi ezininzi ezintsha, iinkonzo ezintsha ezinje carkey ukwandisa, kunye neApple isebenzisana neempawu ezinje ngeBMW kunye nePorsche ukuzisa izinto ezakhelweyo ngu-Apple kwizithuthi, ayinakwenzeka into yokucinga ukuba ukudityaniswa okusemthethweni kweKhayaKit yeemoto kungongezwa kwixesha elizayo, ngakumbi emva kokubona iiprojekthi zovavanyo olupheleleyo. Nye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Umsebenzisi ukongeza imoto yakhe kwiKhayaKit kwaye ayilawule kude
Apple Fitness + iyaqhubeka ukuba ngcono kwaye sihlala silindile ...
Kubonakala ngathi siza kuba nePensile 3 nge-Epreli 20